हिरक महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा किन अनुपस्थित रहे नगरप्रमुख ? – ebaglung.com
२०७६ मंसिर २६, बिहीबार ०८:३१	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
गल्कोट, (रिघा) २०७६ मंसिर २६ । प्रदेशमन्त्री किरण गुरुङ प्रमुख अतिथी रहेको गल्कोट नगरपालिका ११ रिघा स्थित रत्नलक्ष्मी माध्यमिक बिद्यालयको हिरक महोत्सवको उद्घाटन समारोह साँच्चिकै भव्य थियो । रिघाको प्रातकालीन रमणीय सौन्दर्यले हिरक महोत्सव धपक्कै बलेको थियो । जति हेरपनि आँखा नपाट्टिने रिघाको प्राकृत सौन्दर्य बीच पारिलो घाम र सिरसिर चलेको सितल हावाले हिरक महोत्सव उल्लासमय र अविष्मरणीय बनेको थियो ।
महोत्सवको उदघाटन समारोहमा प्रदेशसभा सदस्यहरु, विभिन्न राजनीतिक दलहरुका अध्यक्ष प्रतिनिधी लगायत लव्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । अतिथी, दर्शक, सहभागी, आयोजकहरुको चहलपहल निकै थियो । तैपनि केहि न केहि अपुग जस्तो वा भनौँ नून विनाको तिउन जस्तो अनुभूति धेरैले गरिरहेका थिए ।
त्यस्का ेकारण थियो गल्कोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेको अनुपस्थिति । यस्तो शानदार हिरक महोत्सवमा मेयर साहव नआउँदा कस्तो कस्तो खल्लो लाग्यो भन्दै थिए कसैल त कसैल नआउनुको कारणहरु केलाउदै विभिन्न तर्कहरु गर्दै थिए । हिरक महोत्सवमा किन आएनन् त नगरप्रमुख ? धेरैका लागी चासो र जिज्ञासाको विषय बन्नु स्वाभाविकै थियो ।
नगरप्रमुख गैरे हिरक महोत्सवमा सरीक नहुनुको असली कारण के होला त ? राजनीति, व्यक्तिगत वा अरु कुनै कारण ? हामीले नगरप्रमुख गैरेसंग फोन सम्पर्क गरेर यी प्रश्नको हल खोज्यौँ ।
नगरप्रमुख गैरेले आफु पूर्व अनुबन्धित कार्यक्रममा भाग लिन काठमाडौ गएको जानकारी दिँदै हिँजो बागलुङ सदरमुकाममा सहकारी सम्वन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुनु परेकोले उपस्थित हुन नसकेको बताए । उनले अरु कुनै कारणले हिरक महोत्सवमा अनुपस्थित नभएको होर्ईन भनेर स्पष्ट पारे । ‘यो कुरा मैले महोत्सव आयोजकलाई समेत जानकारी गराएको’ उनले ईबागलुङलाई बताउदै भने-, ‘मंसिर २९ गते महोत्सवको म प्रमुख अतिथीको रुपका सहभागी हुँदैछु ।’
हाम्रा सहकर्मी कमल पौडेलले हिरक महोत्सव स्थलबाट भरखर दिएको जानकारी अनुसार महोत्सवको आजको प्रमुख अतिथी गल्कोट नगरपालिका नगर उपपमुख रेणुका काउचा रहने आयोजकले बताएका छन् ।